इमिलिआनो जातापा - मेक्सिकोका क्रान्तिकारी किसान नेताको जीवन गाथा
जापाताप्रति किसानहरुमा अति धेरै माया र विश्वास थियो । उनको हत्यापछि पनि किसानहरुको मनमस्तिष्कमा बाँचिरहेका छन्, क्रान्तिकारी विचार र आचरणले गर्दा । केही मानिसहरुलाई उनी जिउँदै छन् कि भन्ने विश्वाससमेत रहेको देखियो ।
मेक्सिकोका क्रान्तिकारी नायक इमिलिआनो जापाता ले नेतृत्व गरेको किसान आन्दोलन विश्वकै महत्त्वपूर्ण किसान आन्दोलन मानिन्छ । जापाताले सन् १९१० देखि १९१९ सम्म जमिनदार वर्गपक्षधर राष्ट्रपति पोर्फिरियो दायजको निरङ्कुश शासनविरुद्ध भूमिसुधारको नारामा सशस्त्र किसान आन्दोलन चलाएका थिए । उनले मोरलोस राज्यको त्यलाहुइकान नामक आदिवासी अमेरिकी गाउँबाट किसान आन्दोलन चलाउँदै देशभरीको क्रान्तिको रुप दिएका थिए ।
राज्यले किसानहरुको जमिनमा हस्तक्षेप गरी भकाभक केही कम्पनीको हातमा जमिन दिनथालेपछि जमिनको रक्षा र जीविका सुरक्षाका लागि किसानहरु एकजुट हुन थाले । त्यसबेला जापाता र उनका सहयोगीहरुले विश्वकै लागि आफ्नो आन्दोलन र मागका विषयमा स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे ।
उनीहरुले आन्दोलनका मान्यताहरु अगाडि सार्दै आफ्नो सङ्घर्षका लागि सहयोग र समर्थनका लागि आह्वान गरे । यो खालको अनुरोध एकदमै महत्त्वपूर्ण थियो किनभने सरकारले उनीहरुका मागहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको थियो र उनीहरुका शर्तलाई स्विकारेको थिएन । उनीहरुले मूलतः ‘प्लान डी आयला’ नामक घोषणापत्र बनाएर जमिन आदिवासी किसानहरुबीच वितरण गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । उनीहरुले सरकारले आफ्नो पक्षमा भूमिसुधारको नीति ल्याएमा सङ्घर्ष त्यागिदिने समेत उद्घोष गरे ।
‘प्लान डी आयला’को निर्माणको प्रक्रिया आफै महत्त्वपूर्ण छ । साधारण किसान र गाउँले समुदायले भेला आयोजना गरी भूमिसम्बन्धी नीतिमा के के बुँदा हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा सल्लाह गरे । त्यहाँ आएका विचारलाई विद्यालयका शिक्षक ओटिलियोले नोटबुकमा लेख्ने काम गरे । तिनै नोटका आधारमा ओटिलियो र जापाताले अन्तिम खेस्रा बनाए, जसमा किसान आन्दोलनको मूल योजना र भूमिसुधारका लागि आफ्ना अडानलाई समेट्ने काम गरियो । यसलाई माउन्टेन क्याम्प आयोकुस्तलामा २२ नोभेम्बर १९११ मा भएको विशाल भेलाले अनुमोदन गरेपछि अन्तिम रुप दिने काम भयो । यसलाई स्थानीय पुजारीले टाइप गरी पहिलो कपी तयार गरे । यसरी ‘प्लान डी आयला’’ तयार गरियो ।
यसरी १२ सेप्टेम्बर १९०९ मा तीस वर्षको उमेरका इमिलिआनो जापाता गाउँ सुरक्षा समितिको सभापतिमा छानिए । गाउँका पाकाहरुले निर्णय गरे, जवान नै भए पनि जापातासँग गाउँको जमिन फिर्ता ल्याउने सङ्घर्षको नेतृत्व गर्ने क्षमता छ । उनलाई पाकाहरुले स्थानीय चर्चमा एकहप्ता लामो सम्मेलन गर्न लगाए, जहाँबाट परम्परागत अधिकार, जमिनमाथिको माया र वंशगत अधिकारका विषयमा छलफल गरियो । छलफलपछि जमिन खोज्ने र कब्जा गरिएका जमिनको फिर्ता गर्ने योजना बनाइयो । भिल्ला डे आयला र मोयोटेपेक पनि जापाताले नेतृत्त्व गरेको गाउँ सुरक्षा समितिमा समाहित भए ।
सङ्घर्ष गर्दै जाँदा थाहा भयो, कानुनी रुपमा जमिन प्राप्त गर्नु सम्भव छैन किनभने धेरै न्यायाधीशहरु जमिनदार भएकाले उनीहरुले कहिल्यै पनि किसानहरुको पक्षमा निर्णय गर्दैनथे । त्यसैले गैरकानुनी रुपमा जमिन कब्जा गर्ने प्रक्रियालाई अगाडि सारियो । यो प्रक्रियाको थालनीपछि जमिनदार र सेना आक्रामक भएर आए । त्यसपछि जमिन प्राप्तिको सङ्घर्षले हिंसात्मक रुप लियो । यसले आन्दोलनलाई देशभरि फैलाउने र गहिर्याउने काम भयो ।
किसानहरुले नजिकैका सामूहिक वस्ती चिनामेकाबाट हतियार ल्याए । गाउँले र किसानहरुको सहभागितासहित ‘लिवरेसन आर्मी अफ साउथ’ नामक छापामार सङ्गठन बनाए । एकै महिनापछि नै उनीहरुको सदस्य–सङ्ख्या एकहजार पुग्यो । उनीहरुको सङ्घर्ष अब ‘जमिन, स्वतन्त्रता र न्याय’ प्राप्तिको नाराका साथ आँधीझैं बढ्न थाल्यो, जुन सरकारका लागि ठूलो टाउको दुखाइको विषय भयो ।
नयाँ बनेको भिक्टिोरियो हुयेर्टाको सरकारले जापातालाई किसान आन्दोलन रोक्नका लागि घुस दिने प्रस्ताव गर्यो । उनले सो प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्दै सरकारविरुद्ध सशस्त्र आन्दोलनलाई जारी राखे ।
यसको विरुद्धमा नयाँ सरकार र मेक्सिको सहरका केही जमिनदारहरुको गठबन्धन थियो । त्यसै समयमा लडाकु किसानहरुले फिर्ता लिएको वा कब्जा जमाएको जमिनको सुरक्षा गरे, त्यसमा बाली लगाए । जब सरकारी सेना उनीहरुलाई त्यहाँबाट हटाउनका लागि आयो, विद्रोही किसानहरु समूह–समूहमा आबद्ध हुँदै गए । त्यतिमात्र होइन, उनीहरु आफ्नो घोषणा लागु गराउन कुनै पनि बेला लड्न तम्तयार भए ।
जापाटिस्टा आन्दाेलनका याेद्धाहरू
लडाकु किसानहरुले गरेको सङ्घर्षलाई आधुनिक छापामार कारबाहीसँग दाँजेर हेर्ने गरिएको छ । सरकारी सेना किसान लडाकु नजिक आउँदा उनीहरु कहिले हराउँछन्, कहिले लुक्छन्, कहिले स्थानीय मानिसहरुसँगै घुलमिल भएर बस्छन् ।
जब सरकारी सेनाले आक्रमण गर्ने योजना गर्छन्, तब किसान लडाकुहरुले हडताल गर्छन् । यसरी छापामार शैलीमा लड्दै प्रत्येक साना सहरलाई किसान लडाकुहरुले जित्दै गए, जमिन कब्जा गर्दै जमिनदारहरुको भूस्वामित्त्वको रेकर्डलाई नष्ट गर्दै गए । मोरलोसका धेरैजसो जमिन, ५३ वटा सामूहिक वस्ती, खेती गरिएका जमिन सबै किसानहरुले फिर्ता लिए । साना कृषि उद्योगकर्तालाई भने उनीहरुले सम्मान नै गरे । जमिन वितरणका साथै सन् १९१५–१६ मा किसानहरुका लागि बचत तथा ऋण कार्यक्रम पनि सुरु गरे ।
किसान लडाकुहरुलाई शान्त पार्न देशका विभिन्न भागमा जमिन किसानहरुलाई नै पुनः फिर्ता गर्ने योजना तय गरियो । यो योजना सन् १९१७ को मेक्सिकोको संविधानको दफा २७ मा संविधानसभामार्फत् प्रकट गरियो ।
क्रान्तिपश्चात् विभिन्न संघीय सरकार सत्तामा आए तर कसैले पनि प्रतिबद्धताअनुसार जमिन पुनः वितरण र प्रभावकारी भूमिसुधार लागू गरेनन् । पहिला वितरण गरिएका केही जमिन पनि सरकारी सेनाले फिर्ता लियो ।
पालासिओसले एकजना अमेरिकीको आँखाबाट जापाताको नेतृत्त्वमा भएको सो किसान क्रान्तिको व्याख्या गरेका छन् । उनको भनाइअनुसार पत्रकार विलियम गेट्स अमेरिकी सरकारको तर्फबाट त्यहाँको क्रान्तिको विषयमा अध्ययन गर्न सन् १९१९ मा नियुक्त भएका थिए । र, उनी त्यहाँ पुग्दा निकै आश्चर्यचकित भए, किसान लडाकुहरुको कार्य देखेर, जमिन कब्जा गरेको देखेर, त्यसमा खेती गर्दै जमिनको संरक्षण गरेको देखेर । गेट्सले सामाजिक क्रान्तिको विषयमा सत्य बोलेका थिए ।
पालासिओसले थप लेखेका छन्, जापाता र किसान आन्दोलनका विषयमा मिल्दो सङ्केत र विचार विल्सोन, ल्केमेन्सियु, लायड जर्ज र लेनिनले आफ्नो रचनामा व्यक्त गरेका थिए । आन्दोलनले निश्चित पनि भावुकतापूर्ण विचारलाई सँगालेको छ । इरिक ओल्फका अनुसार यो अझै पनि दृश्यात्मक छ, नयाँ निर्माण गरिएको अनेनेकुल्को सङ्ग्रहालयमा देखिन्छ, जापाता र उनका विद्रोहीहरुले गुडालुपेको उर्वर भूमिमा लडेका कुरा, आदिवासी अमेरिकीहरुलाई दमनबाट मुक्ति दिएको संकेत र भूमिको प्रतिनिधित्त्व गरेको कुरा ।
यो आन्दोलनका लागि महिलाहरुले ठूलो योगदान गरे र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेले, विशेषगरी लडाकु कार्यक्रमहरुमा । आन्दोलनले सन् १९१७ पछि धेरै नै कठिनाइ बेहोर्नुपर्यो । सरकारी सेनाले विभिन्न उपाय लगाएर उनीहरुमाथि दमन गर्यो । सबै गाउँलेहरुले छापामारहरुलाई जुन सहयोग गरेका थिए, त्यसलाई समाप्त पार्यो । अन्ततः जापातालाई सरकारी सेना र एजेन्टले सन् १९१९ को अप्रिल १० का दिन झुक्याएर अविश्वसनीय तरिकाबाट हत्या गरे ।
पछिल्ला दुई दसक जहाँ–जहाँ किसान आन्दोलनहरु भए, त्यहाँ–त्यहाँ किसानहरुका पक्षमा भूमिसुधार भयो, विशेषतः किसानहरुमाथि दमन गरिएका भेरा क्रुज, मिचोन र युकाटनमा ।
सन् १९३० को आधाआधीसम्म सुधारवादी सरकारका प्रमुख जनरल लाजारो कारदेनास पूर्णरुपमा किसान सङ्गठनमा निर्भर रहे । किनकि सेनाको सुरक्षाभित्र रहने परम्परवादीहरुले उनको सहजीकरणको अवज्ञा गरिरहे । तर उनले ल्याएका नीति र कार्यक्रम सबै नै सुधारमुखी थिए ।
भूमिसुधारकै क्रममा १८ मिलियन हेक्टर जमिन सातलाख सत्तरी हजार किसानलाई वितरण गरियो । यसमध्ये प्रायः सबै सिञ्चित क्षेत्र थिए । कहिलेकाहीँ भूमि वितरणका बेलामा हिंसात्मक घटना पनि भए । र, किसान सङ्गठनहरुलाई सरकारले बलियो पार्ने काम गर्यो । तिनको रक्षाका लागि हतियार नै वितरण गर्यो । यो सरकारले प्राकृतिक स्रोतको रक्षाका लागि पनि कडा अडान लियो । जस्तै विदेशीहरुले कब्जा जमाएका तेलखानीलाई राष्ट्रियकरण गर्यो, जुन स्टान्डर्ड र रोयर डच शेल कम्पनीका थिए ।
कार्डेनासको शासनकाल उल्लेखनीय छ, किनकि त्यसबेला जनसमुदायको परिचालन र सहयोगमात्रै भएन, नयाँ खालको आम सहभागिता र समर्थन पनि उपलब्ध भयो । किसान संघहरु र मजदुर युनियनलाई एकै ठाउँमा ल्याएर महासंघ बनाउने काम भयो र ती दुवैलाई राष्ट्रिय आधिकारिक पार्टीमा एकीकृत गरियो, जुन भिन्न–भिन्न नाममा आज पनि शक्तिमा रहेका छन् ।
सन् १९५८ मा स्वतन्त्र किसान सङ्गठनको जासिन्तो लोपेजले युनियन जेनेरल डि ओब्रेरोस मेक्सिकोको नेतृत्व गरे । त्यसले बलियो ढङ्गले जनतालाई सङ्गठित गर्न र साङ्केतिक रुपमा जमिनमाथिको कब्जा गर्न अग्रसर तुल्यायो, जुन ठूला जमिनदारहरुको नियन्त्रणमा थियो । जग्गा कब्जाको काम मुख्यतः मेक्सिकोको उत्तरी प्यासिफिक राज्यमा गरियो, जहाँ सरकारद्वारा ठूला जमिनदारहरुलाई व्यावसायिक खेती गर्न ठूलठूला सिञ्चित क्षेत्र दिइएको थियो । सुकुम्वासी र मोही किसानहरुले सोही जमिनमाथि अधिकारका लागि राज्यको नीतिअनुरुप नै दाबी गरिरहेका थिए । तर बीचैमा भूमिसुधारको काम स्थगित गर्ने र त्यसको फलस्वरुप सामाजिक अशान्ति बढाउने काम भएपछि आजसम्म पनि यो समस्या पूर्ण रुपमा समाधान भएको छैन । अतः जापाताको सपना पूरा गर्न आज पनि किसानहरु जापातिस्ता मुभमेन्ट र अन्य सङ्गठनको नाममा सङ्गठित भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनदेखि सशस्त्र सङ्घर्ष समेत गरिरहेका छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्ः नेपाली कृषिकाे आत्मनिर्भरता र भैंसीपालन – क. दधिराम खतिवडा
Gerrit Huizer, Peasant Mobilization for Land Reform: Historical cases.
विभिन्न वेभसाइटहरु, अनलाइन पुस्तिकाहरू, पत्रिका, लेख रचनाहरू ।
पछिल्लाे - क. भीमदत्त पन्त र सशस्त्र किसान विद्रोह
अघिल्लाे - समृद्ध नेपाल निर्माणमा अघि बढौं – क. प्रकाश